Fikarohana momba ny firaisana Jon Stewart nanao resadresaka momba an'i Jesosy - Fikarohana Reincarnation
Lahatsoratra iray nosoratan'i: Jan Phillips
Nifoha tamin'ny alina lasa aho tamin'ny feon'ny fihomehezana ary nahatsapa fa natory niaraka tamin'ny fahitalavitra aho. Tamin'ny 3 maraina ary fantatro fa izany Jon Stewart amin'ny fahitalavitra, saingy mila misafosafo ihany aho mba hijery ny solomaso hitako hahitana hoe iza ilay mpitsidika azy.
Tsy mampino! Jesosy io, amin'ny akanjony sy ny rehetra. Ny orony dia lehibe noho ny nieritreretako azy, mainty be kokoa ny hodiny, nefa ny masony kosa nanindrona kokoa noho ny noeritreretiko azy. Toy ny nisy jiro nivoaka fa tsy niditra tany amin'izy ireo.
Nanao vazivazy ny momba azy roa lahy i Jon. Jesosy, rehefa avy nihomehy mafy kokoa noho ny noheveriko fa hatao dia nilaza tamim-pitiavana an'i Jon hoe:
“Ie, izany no iray amin'ireo zavatra hafahafa indrindra, sa tsy izany? Ahoana no ahafahan'izy ireo manadino fa ny nanorina ny Kristianisma dia Jiosy? ”
Jon dia teo amboniny rehetra niaraka tamin'ny fanontaniana avy amin'ny vaovao isan'andro. Inona no nataony tamin'ny fiasco Ground Zero izay nisy ny fihetsiketsehana momba ny fananganana Moske eo akaikin'ny tranobe kambana 911 nianjera tany New York? Nilaza i Jesosy fa nahita fampahalalam-baovao vitsivitsy tamin'ilay tantara ary tsy nino ilay tantara an-tsehatra izy ary natahotra izy io.
“Te hanangana tranom-bahoaka ho an'ny vavaka, fanabeazana ary famoriam-bahoaka izy ireo. Zavatra tsara izany. Ny zavatra tsara kokoa angamba dia ny fananganana tranompokonolona. Misy toerana ho an'ny tsirairay, ary ireo fanavahana ny fivavahana ireo no voalohany nahatonga ny olana rehetra. ”
Toa tsy nino i Jon. "Trano iraisan'ny finoana ??"
“Eny, moske misy asa maro, miaraka amin'ny sinagoga, trano fiangonana ary efitrano fisaintsainana ao anatiny. Trano iray ivondronan'ireo olona samy hafa finoana hanao tontolo tsara kokoa. Izay ny resaka fivavahana marina? Tsy resaka fotopampianarana io. Drafitra ho an'ny hetsika io, fotoana iray ahafahana manana hery lehibe kokoa ho amin'ny tsara. Ny fivavahana dia sarintany ihany. Ny finoana no tena mampientam-po. ”
“Tsy haiko,” hoy i Stewart, nanao ny iray tamin'ireo fihetsiketsehana vava mampihomehy izay nataony taorian'ny nandrenesany hevitra hafahafa.
Jesosy dia nandefa fantsona tao anaty hoe: "Inona no mety ho tsara kokoa eo amin'io toerana io noho ny trano izay maneho, amin'ny alàlan'ny firafiny, ny fiarahana miaraka, ny fahitana vaovao izay mihoatra ny faritry ny fivavahana? Toy ny maka hevitra tsara sy mampivoatra azy io. Ny tena mpaminanin'ny andro mahalala izany. Aiza ny feon'izy ireo? Fa maninona no tsy hadinadininao izy ireo? ”
"Hmm, noheveriko fa izaho," hoy i Stewart, nipaika ny pensilihazo teo ambony latabatra.
“Fantatrao ve hoe maninona ianao no manana olana amin'ny sisintany eto? Satria mino ianao fa tena misy ny sisin-tany, toy ny DIKANY zavatra iray. Muslin manohitra ny Kristiana, Meksikana manohitra ny Amerikanina, Repoblikana manohitra ny Demokraty - ireo sisintany rehetra ireo dia voaforona. Nametraka rindrina hiarovana ny hevitrao ianao-ary tsy ny AZO AZY akory, fa ny hevitra nampitaina tamina olon-kafa avy eo dia nataonao lasa demonia ny olona hafa. Tsy azonao ny fifandraisanao. Toy ny rantsan-tànana dimy amin'ny tanana ianao izay mieritreritra fa misaraka ary manamboatra antony tsy tokony hifaneraserana. ”
Nipetraka teo niaraka tamin'ny vavany i Jon.
“Toy ny ankizy milalao ady ianao. Mandany ny fotoananao rehetra ianao, ny herinao rehetra dia manafika ny "ilany hafa" fa tsy mahatsapa fa mila tetezana ny roa tonta ianao mba hahitana fieritreretana avo kokoa. Na ny seho vaovao aza dia miady. Jereo ny fomba fanarabianao an'i FOX. Inona no fahazavana manampy an'izao tontolo izao? Mandritra ny fotoana rehetra azonao omena an'ireo tena mpahita fahitana, ny fomba rehetra ahafahanao ho modely amin'ny fakan-tahaka, asehoy amin'ny mpihaino ny fomba tena FOMBA itondrany ny saina lehibe sy ny mpanohitra, ary mipetraka eo ianao maneso any amin'ny gara hafa. Tena nahazo hazavana izany, sa tsy izany? ”
Sambany aho nahita an'i Jon Stewart tsy nahateny. Toa kilasy faha-6 nahamenatra izy. Tsy misy pensilihazo pensilihazo izao. Mitovy bebe kokoa amin'ny alika kely alika eo anelanelan'ny tongony.
“Inona no ataonareo eto amin'izao tontolo izao? Ireo izay miantso ny tenany hoe 'mpivavaka' dia matetika no tsy matotra indrindra, be mpitsara indrindra ary tsy milefitra. Fa inona izany IZANY? Mifanohitra tanteraka amin'izay ampianarin'ny fivavahana rehetra izany. Ary ny tiako holazaina dia ny fivavahana REHETRA, ”hoy i Jesosy, rehefa nijery lavitra an'i Stewart izy ary niresaka mahitsy tamin'ny fakantsary.
"Ny fivavahana rehetra dia milaza zavatra fototra roa," hoy izy, ary nitazona ny rantsan-tànany tamin'ny fambara fandriampahalemana. "
“Voalohany, tsy misy elanelana misy eo aminao sy ity antsoinao hoe Andriamanitra ity. Andriamanitra no hery mamorona ao ambadiky ny zava-drehetra. Tsy hita io, fa ianao no fisehoany. Lazaiko aminao fa tokony ho fitaratra ny Chapelle Sistine. ”
Mihomehy ny mpihaino, fa i Stewart kosa mijery tsara ny mason'ny Nazareana.
Hoy ihany izy: “Ianareo no maso, tànana, tongotr'io hery mamorona io. Ao aminao izany angovo izany. Fofonaina no iantsoana anao. ”
Notazoniny ny rantsantanany ary nitarihany azy imbetsaka. “Izay no zavatra voalohany. Aza mieritreritra fa misy lehilahy any misintona tady. Mitombo. Ity sivilizasiôna ity-raha azonao antsoina hoe-izany no namoronana anao. Ity Tany ity, tsy vondron-kery hararaotina hararaotina. Tsy tokony hanana izany. Ny reninao, ny kibo no niterahanao. Ianao no fahatsiarovany, ny sela neural. Ny Tany manontolo no zavamananaina anananao. Tsy nidina tety an-tany ianao, niakatra avy tamin'ny tany ianao, toa ahy. Eo an-tananao ny fiadanany. Afaka mirehareha amin'ny zavatra ataonao ve ianao? Ianao ve no ho mpamono azy, rehefa avy niresaka momba ny fiainana an-tany? ”
Niasa kely i Jesosy, toy ny tamin'io andro io, namakivaky ny tempoly namadika ny latabatry ny mpivarotra izy. Jon dia nanapaka ny raharaham-barotra.
“Ary hiverina eto isika handre ny zavatra fototra faha-2 amin'ny vahinintsika anio hariva, ry tompokolahy sy tompokolahy, ilay mpaminany jiosy Jesosy avy any Nazareta. Maharaha vaovao."
Nihomehy momba ny zavatra iray izy ireo rehefa niverina avy amin'ny varotra, dia namelatra ny seziny i Jesosy niaraka tamin'ny tongony lava lelany voaharona ny lambany, ny tongony voaforona tao ambany latabatra.
"OK," hoy i Jon, "zavatra roa no nolazainao. Avelao aho hijerena raha nahazo an'io fahamarinana io aho. Tsy misy toho-volombava ambony rahona. Ilay Andriamanitra resahintsika sy iadiantsika no hery mamorona ao anatintsika sy manodidina antsika? Tsy hita izany ary toy ny…. (Fiatoana lava) ny alokalony? ”
“Tsy marina”, hoy i Jesosy. “Toy ny endrika ara-batana mitovy amin'ny angovo isika. Ny kinova gilasy misy rano na etona. Singa mitovy, endrika samihafa. Ny ranomasina sy ny vongan-dranomandry. Vongan-dranomandry daholo ianareo ao amin'ny Ranomasin'Andriamanitra, ”hoy izy, nihomehy somary nihomehy tamin'ny fanoharana mahazatra azy.
“Fa ny olana dia tsy tsapanao fa ao ambanin'izany rehetra izany dia mifandray daholo ianao. Misy ranomandry lehibe iray fotsiny miaraka amin'ny toro-hevitra maro. Ny marina dia, Ianao no Famoronana manohy ny famoronana ny tenany. ”
"Aadray," hoy i Stewart. “Ary ahoana ny amin'ny isa faharoa? Inona no isa roa tokony ho fantatsika? ”
Notazonin'i Jesosy indray ny rantsan-tànany roa, notendreny ny tendron'ny rantsantanany afovoany. Ny fakantsary dia nanakaiky akaiky azy tokoa dia hitako nisy dian-kapoka teo amin'ny handriny. “Tsy dia ny zavatra tokony ho fantatrao akory, fa izany dia ampahany amin'ny olana, ny rafi-pinoan'ireto olona ireto. Izay no mahatonga anao sahirana. Tsy misy olona tokony hino ahy vao ho any an-danitra. Tsy ny zavatra inoanao no jerena fa ny fihetsikao no zava-dehibe. Raha nisy nianatra zavatra tamin'ny famakiana io Baiboly io dia tokony ho naka an'io izy. Misy 3000 ny fanondroana fanampiana ny mahantra ao. Fa avelao aho hiverina… ”
"Eny," hoy i Stewart. "Ny zavatra faharoa."
"Ny zavatra faharoa dia izao: manadino izay rehetra nianaranao tamina boky masina ary raiso ho toy ny mpirahalahy sy rahavavy ny olona rehetra. Midika ara-bakiteny izany. Raha ny rahalahinao no tonga niampita ny sisin-tany… ny rahavavinao voan'ny homamiadana ary tsy misy fitsaboana ...… ny zanakao tsy afaka nianatra… .ny reninao tsy manan-kohanina ao an-tranony. Ary na eo aza izany, ny rahalahinao izay pelaka na mankahala pelaka, ny rahavavinao izay mpanao politika mpanao kolikoly, ny rahalahinao nanapoaka baomba ny toeram-pitsaboana fanalan-jaza, ny rahavavinao izay nanala zaza. Manao ahoana ny fitiavana tsy misy fepetra? Mampifandray ny tsy fitovian-kevitra, hiaraka amin'ny zavatra azontsika ifanarahana? Afaka mamakivaky andro iray ve ianao nefa tsy mieritreritra hoe tsara kokoa na ambany noho ny hafa? Izay no zavatra tokony hiezahana. Miaina am-pahatokiana izany. ”
“Fa… fa…” hoy i Stewart. “Ary ny amin'ny Tea Party, ny mpampihorohoro, ny Fox News ary ny heloka bevava fankahalana?”
“Raha heverinao fa tsy mitovy aminao izy ireo, dia mifanohitra amin'izay heverinao ho misy azy ireo ary mametraha fahefana an'izao tontolo izao. Aza mifantoka amin'izay diso. Mahereza bebe kokoa ho an'ny tsara. ”
“Aza mifantoka amin'izay diso? Ahoana no hataoko amin'ny fampisehoana? ”
"Izay indrindra. Tadidinao izay nolazain'i Gandhi? Ho fanovana tianao ho fantatra eto amin'izao tontolo izao ve?"
"Azo antoka. Ao anaty vata fampangatsiahana izany no ananako izany teny izany. ”
“Eny, tonga ny fotoana hitondrana azy io lavitra. Mivoatra ianao vahoaka. Nandia ny vanim-potoana maizina ianao, ny vanim-potoana antenatenany, ny vanim-potoana Renaissance, ilay vanim-potoana antsoina hoe Periode of Enlightenment.
Ao amin'ny vanim-potoanan'ny fampahalalam-baovao ianao izao. Mitombo ny fahatsiarovanao.
Amin'ny tontolo ara-batana, manana atleta marika Olaimpika ianao izay mihazakazaka 10 kilaometatra na mihoatra ny andro. Nandany ny ora rehetra mifoha amin'ny fanazaran-tena izy ireo, mihinana sakafo mety, mikaroka akanjo sy fitaovana tsara, miasa rehefa avy manafay.
Ary eo amin'ny tontolo metafizika, ny tontolo ara-panahy, manana olona manao toy izany koa ianao - mystikao sy mpaminaninao manao fanazaran-tena ara-panahy, manafaingana ny fahendreny, manitatra ny fahatsiarovan-tenany, mandresy fitsarana ary mamoaka fitiavana eto amin'izao tontolo izao. Mety ho ao anatin'io sokajy io ianao. ”
Stewart dia manao iray amin'ireo zavatra kendaina, ahem, mametraka ny tanany eo am-bavany. "Tsy misy resaka", hoy izy tamim-pahatsorana. “Mandroso tsara aho rehefa mitsara.”
“Tsara ny mahafantatra ny tenanao. Samy mivoatra amin'ny sanda samihafa ianareo rehetra. Amin'ny fararano, rehefa mijery hazo maple ianao dia mahita ravina maitso, mavo, volomboasary ary mena. Tsy miova amin'ny fotoana iray izy rehetra. Ary izany no mampientam-po ny fiainana. Samy hafa ny zavatra fantatrareo. Izany no antony ilana ny fifandraisanareo. ”
I Stewart dia nanaketraka ny lohany tamin'ny nifanarahana, natorony teo amin'ny latabatra indray ny pensilihazo.
“Saingy miverina any Gandhi. Miombon-kevitra amin'ny zavatra nolazainy aho, saingy hafa ny fomba hilazako azy, ny fanetsiketsehana kely fotsiny ny zavatra, izay tiako atao. Raha ny tokony ho izy, dia mety hametaka sticker matevina: Ho Andriamanitra tianao ho hitan'izao tontolo izao ianao. ”
"Oh-oh, toa manevateva ahy," hoy i Stewart.
"Fantatrao toa ahy koa, ny hevitra tsara rehetra dia fanalàm-baraka."
"OK, tsara, lany fotoana isika," hoy i Stewart, rehefa nihetsika ny fakantsary noho ny tifitra nataon'ny mpijery. Mijoro daholo izy ireo, ny sasany mitomany sy mihomehy miaraka amin'izay, ny endrika tsy mampino indrindra amin'ny fiarahan'ny kolontsaina hitako. Ary nandeha Jesosy ary nanomboka nifandray tànana tamin'izy ireo. Alina re izany! ”
Ity essay ity dia nosoratan'i Jan Phillips: www.janphillips.com
3 septambra 2010: hanjaka ny fahasambarana.
Andininy lehibe: “Toy ny rantsan-tànana dimy amin'ny tanana ianao izay mieritreritra fa misaraka izy ireo ary mamorona antony tsy tokony hifaneraserana.”